Sandaly Royal Caribbean fanovana tanteraka
Home » Vaovao Karaiba » Sandaly Royal Caribbean fanovana tanteraka
Kiraro fanovana Royal Caribbean
Manoloana ny fitrandrahana vao haingana tao amin'ny fisotroan-dronono any Jamaikana, ny Sandals Royal Caribbean indray dia manampy amin'ny tolotra mahafinaritra miaraka amina sokajy efitrano vaovao 2 ho isan'ny tranobe vaovao, manaiky ny fahatongavan'ity Desambra ity.
Ny fiovan'ny Sandals Royal Caribbean dia feno sokajy efitrano mihaja vaovao.
Ny tranoben'i Checkers izay miorina ao amin'ny Village Caribbean dia milamina dia ho sangan'asa misy rihana 4.
Afaka misafidy ny Suites Crystal Lagoon Hideaway Swim-up Club Level Jr miaraka amin'ny Patio na amin'ny balkon ary miaraka amin'ny tubes soak.
Amin'ny maha mpitarika ao amin'ny fizahan-tany any Karaiba sy ny indostria misy ifandraisany rehetra, ny Sandals Resorts International (SRI) dia manangom-bola tsy tapaka amin'ny portfolio-tsarany sy ny traikefan'ny vahiny manerana ny faritra. Androany, nanambara ny fanitarana ny fanovana tao amin'ny Sandals Royal Caribbean Royal Caribbean izay nanatontosa mari-pankasitrahana. Any Montego Bay, Jamaika, dia azony atao ny mamandrika izao ho an'ireo tonga manomboka ny 15 Desambra 2021, ny trano Checkers vaovao rehetra dia ahitana sokajy efitrano vaovao 2, ao anatin'izany:
• Suite vaovao 12 Crystal Lagoon Hideaway Swim-up Club Level Jr. Suites misy fantsom-pitotoan-drano vita amin'ny Patio
• Suites 36 Crystal Lagoon Hideaway Jr vaovao XNUMX miaraka amina fantsom-boaloboka ao anaty lavarangana
Any amin'ny tanàna Caribbean dia milamina, ny trano Checkers dia sangan'asa misy rihana 4, mitohy amin'ny fomban'ny Sandals amin'ny toeram-pandraisana ambany ambany ho an'ny olona 2 fitiavana. Ny vahiny dia hankafy ny fidirana amin'ny efitrano fialan-tsasatra Club Sandals manokana sy serivisy concierge, izay mitantana ny fangatahana sy ny famandrihana manokana, ao anatin'izany ny fizahana manokana sy ny tolotra amin'ny efitrano tontolo andro.
Ny mpivady dia afaka misafidy eo amin'ny 12 Crystal Lagoon Hideaway Swim-up Club Level Jr. Suites miaraka amin'ny Patio Tranquility Soaking Tubs ™ miorina amin'ny rihana ambanin'ny tranon'ny Checkers, manolotra fidirana dobo filomanosana mivantana avy amin'ny patio ivelany manokana (kapa iray voalohany ho an'ny Vahinin'ny Club Level ao amin'ny Sandals Royal Caribbean) mandritra ny atitany izy ireo dia afaka mifaly amin'ny famafana ireo fanaka namboarina ho fanao, farafara farafara farafara misy sonia Sandals, fisotroana ao amin'ny efitrano feno zava-pisotro misy alikaola sy trano fandroana voatendry fatratra manana fandroana maoderina, fitaratra misy tara-pahazavana ary jiro mikatona ao anaty toerana milamina sy toy ny spa.
Miorina amin'ny rihana roa ka hatramin'ny efatra, ny 36 Crystal Crystal Lagoon Hideaway Jr. Suites vaovao misy lohan-tsambo soaking Tubs ™ dia manome ny zaridaina milamina sy ny fiandrasana dobo avy amin'ny lavarangana manokana misy ny Tranquility Soaking Tub ™ malaza ho an'ny roa, ambain-tsiambaratelo ary sakafo fisakafoanana bistro. Ny atin'ny suite dia manasa fialan-tsasatra tsy misy farany miaraka amin'ny faritra ipetrahana, fahitalavitra HD Smart lehibe, ary kojakoja namboarina namboarina ankoatry ny fampitaovana hafa.
Ny fanampian'ireto efitrano vaovao 48 ireto dia manamarika ny andiany farany fanavaozana sy ireo kojakoja vaovao hanombohana azy ao amin'ny Sandals Royal Caribbean, izay nahatratra 280 ny isan'ny efitrano fisaorana. Hatramin'ny volana desambra 2019, dia namoaka andiam-panatsarana be dia be ny Resort, voalohany nampiditra voalohany trano fisakafoanana vaovao - Spice, mitondra ny tiana ankafizin'i Pan-Karaiba ho an'ny fiainana fisakafoanana nosy marina; Bombay Club, manolotra nahandro Indiana matsiro misy lovia toa ny Chicken Chicken be mpitia sy safidy vegan ary vegetarian toy ny Aloo Gob; ary La Tavola, mamela ny vahiny handray anjara amin'ny nahandro, fampiononana ary firaiketam-po hita manodidina ny latabatra italianina rehetra. Ny fanavaozana ny efitrano 36 manerana ny tranon'ny Caernarvon sy Arundel dia nanomboka tamin'ny taona 2020 niaraka tamin'ny fivoarana ny South Pool sy ny manodidina azy, anisan'izany ny cabanas vaovao miaraka amin'ireo mpankafy sy jiro, jacuzzi vaovao ary faritra fandroana ivelany vaovao.
Miorina tsara ao Mont Bay Bay, Jamaika, Sandals Royal Caribbean dia fialokalofana ara-tsindrimandry anglisy voahodidin'ny zaridaina voakarakara tsara, dite folakandro mahafinaritra ary morontsiraka fasika fotsy. Toeram-pisakafoanana hisakafoanana Global-Gourmet ™ misy kintana sivy sivy mahavariana, Red Lane® Spa izay mamelombelona, ​​tany tsy misy fetra sy seranam-piaramanidina, nosy tsy miankina iray manokana ary Bungalow et Villas any an-dranomasina malaza indrindra, mirehareha amin'ny lafo vidy rehetra ny Sandals Royal Caribbean vahiny mankafy. Fanampin'izany, miaraka amin'ny fidirana an-tsokosoko amin'ny toeram-pialan-tsasatra akaiky an'ny orinasa, Sandals Montego Bay, ny safidy hiravoravoana amin'ny rendrarendra dia tena tsy misy farany.
Sandals Royal Caribbean izao dia manaiky famandrihana ho an'ireo trano onenan'ireo tonga ireo manomboka ny 15 Desambra 2021. Raha mila fanazavana fanampiny na hamandrihana ny fialan-tsasatrao Luxury Included® manaraka dia miantso ny Travel Advisor anao, boky an-tserasera , na miantso 1-800-SANDALS.
Tonga amin'ny alatsinainy izao ny minisitry ny UK dia ao amin'ny trano fisotroana
Azon'ny planeta atao ve ny miandry ny tsimatimanota COVID any Afrika?